Conservatoire national de Madagascar: omena vahana kokoa ny maha Malagasy | NewsMada
Fampianarana mozika ! Manomboka manana ny lanjany eo amin’ny Malagasy. Ho an’ny toeram-pampianarana tantanan’ny fanjakana, tafatsangana ny Conservatoire national de Madagascar. Manana izay heveriny ho laharam-pahamehana ny mpitantana azy ity…
Sambany eo amin’ny tantaran’ny fampianarana mozika… Taona 2016, nivoaka ny didim-panjakana manambara ny fijoroan’ny Conservatoire National de Madagascar. Ahitana taranja maromaro ny ianarana ao anatiny. Maro mifandraika amin’izay rahateo ny zavamaneno ampianarina ao anatiny. Anisan’izany ny piano, ny gitara, ny valiha, ny flûte, ny kabôsy, ny violon, ireo zavamaneno tsofina. Miampy dihy isan-karazany toy ny dihy malagasy, ny dihy ankehitriny, ny klasika, ny fianarana ny Qi Gong, sns.
Raha ny fanazavan-dRatovo Andriamary Luc Olivier, talen’ny Conservatoire national de Madagascar : «omena vahana sy lanja kokoa ny maha Malagasy eo anivon’ity toeram-pampianara ity. Izay ny anisan’ny tombony sy mampiavaka ny CNM raha oharina amin’ny « conservatoire » hafa any ivelany ». Nohamafisiny fa « rariny izany satria an’i Madagasikara izy ity ».
Manana karazana gadona sy hira maro ny Malagasy. Ireny no anisan’ny ianarana ao amin’ny Conservatoire national de Madagascar. Ireny ihany koa no hiompanan’ny fikarohana sy fandalinana hatao eo anivon’izany CNM izany. Nohamafisin’ny talen’ny CNM fa « anisan’ny anjara andraikitry ny Conservatoire national de Madagascar ny manangona sy mitahiry ireny mozika mampiavaka an’i Madagasikara ireny. Mila hangonina izy ireny. Mila soratana solfezy ihany koa ».
Na izany aza, amin’ny maha toeram-pampianarana mozika manana fivelarana eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena ny CNM, ianarana ao ihany koa ny mozika na hira na gadona hafa, fantatra maneran-tany.
Fiaraha-miasa amin’ny Sinoa mpanakanto
Raha ny fanazavan’ny talen’ny CNM hatrany, anisan’ny taranja ampianarina ao amin’ity ivontoerana ity ihany koa ny “qi gong”. « Anisan’ny fifanakalozana koltoraly ifanaovana amin’ny Sinoa mpanakanto izy io. « Raha ny vina, mety hisy mpanakanto avy any Sina handalo eto Madagasikara hitrandraka sy hifanakalo amintsika eto Madagasikara », hoy hatrany Ratovo Andriamary Luc Olivier.
« Mifameno tanteraka amin’ny fianarana mozika sy dihy ny “qi gong” », hoy Randrianarisoa Claude Justin, hampianatra ity taranja ity eo amin’ny Conservatoire national de Madagascar. Anisan’ny soa azo avy aminy, ohatra, ny firindran’ny fahasalamana, ny fahatsiarovan-tena sy ny fahaiza-miaina. Ny fahaiza-mihaino sy mahatsapa ny fisian’ny hafa. Notsiahiviny tamin’izany fa mitondra vokatra tsara ny fanaovana «qi gong» mialoha ny hampiasana (hitendrena na hitsofana…) zavamaneno.